राजेशमान भर्सेज सरावगी | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home गृहपृष्ठ राजेशमान भर्सेज सरावगी
राजेशमान भर्सेज सरावगी
स्थानीय निर्वाचन सकिएको छ । हारजितको लेखाजोखा गरिएको छ । तर वडादेखि नगरसम्म निर्वाचन २०७९ अत्यन्तै खर्चिलो साबित भएको छ । व्यापारी पृष्ठभूमिका पूर्वमेयर विजय सरावगी सूर्य चिह्नबाट उठेपछि केही म्याद गुज्रिएका नेताहरुलाई दशैं नै आको थियो । मेरो वडा नं. ५ कुम्हालटोलमा सरावगीलाई जिताउने ठेक्का लिएका एउटा म्याद गुज्रिएका नेताले कुस्त रकम कुम्ल्याएको चर्चाले वीरगंज गन्हाएको छ । रकम ऐंठन सरावगीलाई चनाको झारमा चढाउने यस्ताको वास्तविकता बुझेपछि वैशाख ३१ गते बिहानै काठमाडौं कुलेलम ठोके र हप्ता दिन जति मोबाइलको स्वीच अफ गरेर गुप्तवासमा गए । एकातिर सरावगीको पैसा अर्कोतिर छाता छापबाट मेयर पदमा उठेका राजेशमान सिंह पैसा नभएर इन्तु न चिन्तु भएर फटेहाल निर्वाचनको मैदानमा डटेका थिए । भनिन्छ पैसा बोलता है, तर यसपालि सरावगी एन्ड कम्पनीको पैसा बोलेन, बरु राजेशमानको गरीबीको बोलबाला रह्यो र वीरगंजको इतिहासमैं सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भए । यहाँ एमाले र विमालेको सङ्घर्ष पनि रोचक र घोचक रह्यो ।
सरावगीलाई नगवामा जनताले घेर्नु, पूर्वमेयर विमल श्रीवास्तवलगायतको गलफत्तीपूर्ण भिडियो सार्वजनिक हुनु तथा सरावगीको मोटो रकम गिरोहहरूमा सीमित व्यक्तिले बाँडफाँड गर्नु, नूनचुकसहित ओलीको बोली तथा सीमित गिरोहबाज, दगाबाजहरूको पञ्जामा सरावगी फस्नु, उनको पालामा महानगरपालिकामा बेथिति बढ्नु, महानगरमा सेवाग्राहीले अनाहक दुःख पाउनु र थोपरिएको अनावश्यक कर भार नै उनको पराजयको प्रमुख कारण बन्यो । धन–कुबेरझैं पैसा खर्च गरेका उनले यति ठूलो भारी मतले पराजित हुने कल्पना भने गरेका थिएनन् । यो स्थानीय चुनावमा एमाले र सरावगी मात्र होइन, पूर्वमेयर विमल श्रीवास्तवसमेतको लङ्गोट खुलेको छ । यस्तै समूहहरूले सूर्यको पचास हजार भोट छ भन्दै राम्रै रकम असुली गरेको चर्चा महानगरमा व्याप्त छ । राजेशमान हराऊ अभियानमा स्थानीय एमालेभन्दा साइकल छापका विमल श्रीवास्तवले बढेचढेर हिस्सा लिएको दिनको घामझैं छर्लङ्ग छ । यिनीहरूको औकात त बिचरा पुरुषोत्तमलाल झाले ल्याएको भोटले देखाउँछ ।
विमल श्रीवास्तवको बसोवास रहेको वडा नं. ५ मा राजेशमानले सात सयभन्दा बढी मत ल्याए भने सरावगी चार सयको हाराहारीमा अड्किए । श्रीवास्तवहरूले राजेशमानको बाल बाँका गर्न नसके पनि त्यसको बदला छाता छापमा सोही वडाका वडाध्यक्षका उम्मेदवार सुशील सिंह क्षत्रीलाई २८ भोटले शिकार बनाई हराइदिए । भनिन्छ यिनीहरूको औकात झरेर अब वडाध्यक्ष र वडासदस्यलाई जिताउने हराउनेमा सीमित छ, त्यो पनि आफ्नै वडामा मात्र है । काम लागेन, बाप बडा ना भैया सबसे बडा रुपियाँ । वीरगंजमा विमाले पतनोन्मुख छ, पक्का हो । अत्यधिक मतले राजेशमानले जितेर जनता समाजवादी पार्टीको नाम उच्च गरेका छन् । उनको यो उल्लासपूर्ण विजयमा सांसद प्रदीप यादव, मुख्यमन्त्री लालबाबूराउत गद्दी, पार्टीका होनहार कार्यकर्ता र नगरवासीको अतुलनीय योगदान छ । अब जसपा र राजेशमानको जिम्मेवारी बढेको छ, महानगरपालिकामा पूर्व प्रमुखद्वारा गरिएका र रचिएका गलत कामहरूलाई सच्याउँदै महानगरमा चर्चामा रहेको लुटखसोटलाई सफाचट गर्दै, विकास निर्माणमा दत्तचित्त भई सक्रिय हुनु राजेशमानका लागि एक मात्र विकल्प हो । वीरगंजको बेथिति बढार्दै राजेशमानले भोलिको सुनौलो बिहानी सुनिश्चित गर्ने शुभकामनाका साथ बिदा चाहन्छु ।
Previous articleसामुदायिक विद्यालयको आवश्यकता
Next articleडिभिजन वन कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारको छानबीन शुरू